तेह्रथुममा कांग्रेसले खाता खोल्यो, दलित महिला सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित
२०७४ असार ५ सोमबार, तेह्रथुम। दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छ। तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेसकी दलित महिला सदस्यतर्फकी उम्मेदवार विजुलीमाया शंकरको एकल उम्मेदवारी परेको छ। उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने भएकी कांग्रेस जिल्ला सभापति गोविन्द ढुंगानाले जानकारी दिए। ... बाँकी अंश»
पाँचथरमा एमालेमा पहिरो, ढेड सय एमाले कार्यकर्ता काँग्रेसमा, भित्र्याए गगनले
२०७४ असार ५ सोमबार, पाँचथर । चुनावको मुखमा पाँचथरमा नेकपा एमालेलाई झड्का लागेको छ । ... बाँकी अंश»
राजपाको चुनाव विथोल्ने अभियान कमजोर, मतदान गर्ने दिन बन्द आव्हान
२०७४ असार ५ सोमबार, काठमाडौं । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिई चुनाव विथोल्ने रणनीति बनाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले मनोनयन दर्ताको दिन असफलता पाएपछि केही कमजोर सावित भएको छ । ... बाँकी अंश»
टीकापुरमा थारु र पहाडी दुबै समुदायका पीडितले पाए राहत
२०७४ असार ४ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटना र त्यस आसपास भएका तोडफोड एवं आगजनीका पीडितलाई राहत विरण गर्ने काम लगभग सक्काएको छ । ... बाँकी अंश»
उम्मेदवारी दर्ता जारीः आन्दोलित राजपाले रुपन्देहीमा दियो उम्मेदवारी
२०७४ असार ४ आइतबार, बुटबल । आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले रुपन्देहीमा उम्मेदवारी दिएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रदेश १, ५ र ७ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सुरु, राजपाको तराई बन्द आव्हान
२०७४ असार ४ आइतबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
दाङमा सवै दलका मेयर उम्मेदवार एउटै मञ्चमा
२०७४ असार ३ शनिबार, दाङ। तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका मेयर पदका उम्मेदवारहरुले तुलसीपुरलाई सम्वृद्ध तुलसीपुर बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन । शनिबार दाङको तुलसीपुरमा एभिन्युज टेलिभिजनले आयोजना गरेको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यक्रममा बोल्दै उनिहरुले तुलसीपुरको समग्र बिकासकालागी लागि पर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन । ... बाँकी अंश»
काँग्रेसको समावेशीता धनगढीको दलित समुदायको मेयर उमेद्वारले पुष्टी गरेको छः लेखक
२०७४ असार ३ शनिबार, धनगढी। नेपाली काँग्रेसका नेता तथा स्थतानिय तह निर्वाचनका लागि पार्टीबाट गठित प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले दोस्रो चरणको चुनाव पछि समग्रतामा काँग्रेस ठूलो दल हुने दावी गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै नेता लेखकले पहिलो चरणमा केहि पछाडि परेपनि दोस्रो चरणमा काँग्रेस पहिलो पार्टी बनेर आउने दावी गरेका हुन्। ... बाँकी अंश»
ठूला दलको निर्वाचन प्रचारमा बालबालिका, आयोगले पठायो सचेतपत्र
२०७४ असार ३ शनिबार, काठमाडौं । मुख्य दलहरुले नै निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा बालबालिका प्रयोग गरेको भेटिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गतिविधि तत्कालै रोक्नको लागि सचेत पत्र पठाएको छ । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल एवं मातहतका संगठनहरू तथा भातृसंगठनबाट राजनीतिक गतिविधिहरूमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, तथा मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) लाई पत्र पठाई बालबालिकाको प्रयोग नगर्न नगराउन अनुरोध गरेकोे जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
मुलकको विकास तथा समृद्धि गर्न काँग्रेस नेतृत्वको आवश्यकताः डा महत
२०७४ असार ३ शनिबार, पाँचथर । नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले गरिब विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न र मुलकको विकास तथा समृद्धि गर्न स्थानीय तहमा पनि काँग्रेस नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
काठमाडौँका दुई सय स्थानमा यातायात सङ्केत बत्ती राख्न निर्देशन, ट्राफिक समस्या चुनौती
२०७४ असार ३ शनिबार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका करिब २०० स्थानमा यातायात सङ्केत बत्ती राख्न निर्देशन दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
सांसद्ले गरिखान दिएनन् स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई !
२०७४ असार २ शुक्रबार, काठमाडौं । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसे भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरु निजामती कर्मचारीहरु 'बढी जान्ने भएर' स्थानीय तहमा सबै अधिकारहरु कार्यकारी अधिकृतमा नै सीमित गराईदिएको आरोप खुल्लमखुल्ला लगाउने गरेका छन् । यसअघि २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यस अघि २०४८ सालमा बनेको नगरपालिका कार्यविधि ऐनले समेत जनप्रतिनिधिलाई दिएको नक्सा स्वीकृत गर्ने लगायतका यावत अधिकारहरु अहिले सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ ले स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखसँग रहने उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर अधिकार खोसेको आरोप स्थानीय कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । ... बाँकी अंश»
एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित, ए प्लस ल्याउने विद्यार्थी १२ हजार
२०७४ असार २ शुक्रबार, काठमाडौं । माध्यमिक तहको परीक्षा एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार विहान ८ बजे राष्ट्यि परीक्षा बोर्डको बैठक बसी परीक्षा फल सार्वजनिक गरेको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
विज्ञहरुले भने –चुनाव सारिनु संसदको आयु लम्ब्याउने खतरनाक खेल
२०७४ असार १ बिहिबार, काठमाडौं । संविधान अध्येयता एवं विज्ञहरुले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोजमा गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिनिधि घटना मात्र भएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णय मुलुक वर्बाद पार्ने मात्र नभई संवैधानिक संकट ल्याउने खेलखण्ड भएको बताए । ... बाँकी अंश»
गृहमन्त्री शर्माले खुलमखुल्ला भने–‘मलाई नेताकहाँ दाैड्नेको फोन आयो, मैले त्यो काम गर्दिन भने’
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, काठमाडौँ । गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रहरी प्रशासनमा आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । सुरक्षा विषयमा समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्व नगरे सरकारको उद्देश्य पूरा नहुने तर्क गरे । मन्त्री शर्माले भने, ‘म राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने छैन । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने छु । राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व फरक कुरा हो । राजनीतिक नेतृत्व नगरे त काम कसरी बन्छ । संवैधानिक कार्यभार कसरी पूरा हुन्छ ? ।’ ... बाँकी अंश»